Deg deg:Qarax Ismiidaamin ah oo goor dhaw ka dhacay Xarun Turkiga deggenaayeen Muqdisho | warsugansomaliya.wordpress.com
Deg deg:Qarax Ismiidaamin ah oo goor dhaw ka dhacay Xarun Turkiga deggenaayeen Muqdisho
Warar hadda soo gaaray Warqabadka Nabadbile.com ee magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey uu gudaha ugalay xarun Turkiga ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho.
Wali faah faahino badan lama ogaan karo khasaaro waa jiraa sida dadka ay sheegayaan laakiin rasaas xoogan ayaa la maqlayaa waxaana wadada udhaxeysa Tarabuunka ilaa KM4 la sheegay in la xanibay isku socodkeedii.
Wiil kusugnaa meel ku dhaw halka qaraxa uu ka dhacay ayaa soo sheegaya in xaalad adag ay ka taagan tahay meesha la qarxiyey oo ahayd xarun hay’ado Turkiga deggenaayee.
Wixii kasoo kordho qaraxaasi ka dhacay goor dhaw Muqdisho dib kala soco insha allah
← FAALLO : Hadi maamul yimaado kama maarmo mucaarad.
DHAGAYSO: Arin Mudooyinkii ugu danbeeyey ay ka nasteen Shacabka Muqdisho oo dib u soo laabatay →